အားသာချက် - တရုတ် Tianyi Group မှ
1. ကျိုးချည်စုတ်ယူခြင်း device ကို: အကြိုးကျိုး, ကျိုးချည်အလွယ်တကူထွက်စို့နိုင်ပါသည်အော်ပရေတာထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးပါမည်သည့်အခါ။ 2. မြေတပြင်လုံးလမ်းထုတ်အော်တို doffing HQF2011 အော်တို doffing roving စက်အလိုလိုသိအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အထိရောက်, လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူခြင်း, လွယ်ကူသော troubleshooting process ကို doffing ထွက်တပြင်လုံးကိုလမ်း doffing အော်တိုချမှတ်။ 3. မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အာရုံခံကိရိယာများနှင့် 0.1mm တိကျမှန်ကန်မှုအားဖြင့် microcomputer ထိန်းချုပ်မှုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အာရုံခံကိရိယာကိုစမ်းသပ်သည့် roving အနေအထား၏အကောင်းဆုံးအကွေ့အကောက်များသောတင်းမာမှု ...
1. ကျိုး ချည်စုတ်ယူခြင်း device ကို:
2. မြေတပြင်လုံးလမ်းထုတ်အော်တို doffing
3. မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အာရုံခံကိရိယာများနှင့် microcomputer ထိန်းချုပ်မှုအကောင်းဆုံးအကွေ့အကောက်များသောတင်းမာမှု
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အာရုံခံကိရိယာကိုစမ်းသပ် 0.1mm တိကျမှန်ကန်မှုအားဖြင့် roving အနေအထား, microcomputer တင်းမာမှုများ၏ပြည်နယ်သတိရအမျိုးမျိုးချည်ငင်အခြေအနေများ (လက်ကမ်းကြော်ငြာအမြန်နှုန်း, အသံအတိုးအကျယ်နံပါတ်) ကိုလိုက်လျောညီထွေတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးတင်းမာမှုသည်ပြည်နယ်၏အလိုအလျှောက်ရွေးချယ်ထားသည့်နိုင်ပြီးကိုယ်တိုင်သည့်အခါသတ်မှတ်ထားဖို့မလိုအပ်ပါဘူး တင်းမာမှု၏ပြည်နယ်။
4. Flyer နှင့် bobbin ခါးပတ်အခြိနျဇယားချမှတ်
လက်ကမ်းကြော်ငြာနဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ချည်ငင်လိုအပ်ချက်များကိုအဘို့အခါးပတ် drive ကို mode ကိုအခြိနျဇယား, ရေနံရေချိုးဂီယာအုံနှင့်အတူလှည့်လှုပ်ရှားမှု bobbin ကြောင့်မြင့်မားတဲ့ဂီယာထိရောက်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ခါးပတ်အလျားလိုက်လည်ပတ်နည်း wear နှင့်အနိမ့်ဆူညံသံနှင့်အတူထူးခြားတဲ့ခါးပတ်တင်းမာမှုများဖွဲ့စည်းပုံမှာသေချာစေရန်။
ယခင်: FB471 သိုးမွှေးချည်ငင်ယင်ကောင်သည် frame
နောက်တစ်ခု: JW81 ရေဂျက်ရက်ကန်းစင်
အလိုအလျောက် Doffing Roving စက်
သိုးမွှေး Roving စက်
3 JW51 ရေဂျက်ရက်ကန်းစင်